Mabda'a aasaasiga ah ee kuleylka firfircoonida, waa maxay kuleylintu
Asalka aasaasiga ah mabda 'kuleylka kuleylka ayaa la fahamsan yahay lagana codsadey wax soosaarka tan iyo 1920s. Intii lagu jiray dagaalkii labaad ee aduunka, tiknoolajiyada ayaa si degdeg ah u kobcisay si ay u daboolaan shuruudaha degdega ah ee loogu talagalay geedi socodka dhakhsaha leh, oo lagu kalsoon yahay si loogu adkeeyo qaybaha mashiinka birta Waxyaabaha dhowaan la soo dhaafay, diiradda saara farsamooyinka wax soo saar la'aanta iyo xoogga la saaro xakamaynta tayada tayada waxay keentay in dib loo furo tiknoolajiyada soo saarida, oo ay weheliso horumarinta xukunka oo dhan, sahayda tamarta dabka qaboojinta.
Kuleylka induction wuxuu ku dhacaa shay koronto ku shaqeynaya (maaha qasab maaha macdanta birta leh) marka shayga la dhigo meelo badan oo magnetic ah. Kuleylka kuleylaha ayaa sabab u ah khasaarihii qallafsanaa iyo burburinta hadda.
Khasaaraha Hysteresis wuxuu ku dhacaa oo keliya walxaha birlabta sida birta, nikkel, iyo kuwa kale oo aad u yar. Khasaaraha Hysteresis wuxuu sheegayaa in tan ay sababtay isku dhac u dhexeeya maaddooyinka marka maaddada la soo gaabiyo marka hore hal dhinac, ka dibna dhinaca kale. Molikuyuullada waxaa loo qaddarin karaa inay yihiin birlabyo yaryar oo ku soo jeedsada dhinac kasta oo u rogaa jihada aagga birlabta. Shaqada (Tamarta) ayaa looga baahan yahay inay ku soo rogto. Tamarta ayaa isu rogta kuleyl. Qaddarka kharashka tamarta (awoodda) wuxuu ku kordhayaa heerka kororka dib u celinta (soo noqnoqodka).
Khasaaraha Eddy-hadda wuxuu ku dhacaa walxo kasta oo qabashada ah oo ku jira aag magnet oo kaladuwan. Tani waxay keenaysaa cinwaan, xitaa haddii qalabku uusan lahayn wax ka mid ah astaamaha magnetka ee badanaa la xiriira birta iyo birta. Tusaalooyinka waa naxaas, naxaas, aluminium, zirconium, birta birta ah ee nonmagnetic ahama, iyo uranium. Wareegyada Eddy waa durdurrada korantada ee ay ku kacdo ficil-celinta wax-ku-beddelka maaddada. Sida magacoodu tilmaamayo, waxay umuuqdaan inay ku dhex wareegayaan wareegyo isdabajooga ah oo ku dhex jira waxyaabo adag. Khasaaraha Eddy-hadda ayaa aad uga muhiimsan khasaarihii hysteresis ee kuleylka kuleylka. Xusuusnow in kuleylka kuleylinta lagu dabaqayo walxaha non-magnetic, halkaas oo aysan jirin wax khasaaro hysteresis ah.
Wixii kululeynta ee birta loogu talagalay adkaynta, farsamada, dhalidda, ama ujeedo kale oo u baahan heerkul ka sarreysa heerkulka Curie, kuma tiirsanaan karno qoorshaha. Dhuxulku wuxuu lumiyaa guryaha macdanta ka sarreeya heerkan. Marka birta la kululeeyo dhibicda Curie ee hoose, saamiga qorraxdu caadi ahaan waa yar tahay in la iska indho tiri karo. Dhammaan ujeedooyinka dhabta ah, I2R of the eddy currents waa habka kaliya ee tamarta korontada loo rogi karaa kuleylka ah ujeedooyinka kuleylka induction.
Labo waxyaabood oo aasaasi ah oo kuleylinta kuleylinta u dhacdo:
Beddelaadda beerta magnetka
Qalabka korontada ku shaqeeya ee la dhigo dhulka maadiga
aasaasida kuleylka kuleylka